Redmi K20 agbaji AnTuTu tinyere Snapdragon dị ike 855 | Gam akporosis
Redmi K20 agbaji AnTuTu tinyere Snapdragon 855 dị ike
Xiaomi abụrụla ihe iwe na mbido ọkọlọtọ ọhụrụ nke OnePlus 7 Pro, ikenye ọkwa nke mbata nke onwe ha flagship ọchụ, ndị Redmi K20.
Ugbu a Redmi General Manager Lu Weibing gosipụtara na K20 ga-egosipụta Snapdragon 855 elu-ọgwụgwụ, ihe e chepụtara ogologo oge tupu na nke ahụ bụkwa nkọwa zuru ezu na AnTuTu ule nke anyị na-egosi n'okpuru. Nke a ga-abụ oge mbụ Redmi napụrụ ndị nhazi na ụdịdị dị n'etiti.
Lu kpughere akara AnTuTu K20 na ọ dị elu, ọbụna maka smartphone nke Snapdragon 855 kwadoro.
Thedị K20, nke akpọrọ 'Raphael', debara aha Ihe 458.754 na usoro ntọala AnTuTu. Nke a dị oke elu ebe ọ bụ na ọtụtụ ekwentị Snapdragon 855 na-erughị 400K n'otu akara ahụ.
Iji nye gị ụfọdụ n'ọnọdụ, ndị Anyị bụ 9, nke bu otu n’ime ọkọlọtọ kachasi elu na AnTuTu, nwere akara akara 370,00. Nke ahụ dị nnọọ obere karịa ọnụ ọgụgụ ahụ e kwuworo.
Site na Redmi ịbanye n'ahịa ahịa, anyị enweghị ike ịjụ mana ebe ọ ga-anọ n'ọnọdụ ọkwa. E kwesiri ka K20 bụrụ nke na-esote Obere F2, ma o doro anya na ọ gaghị adị otú ahụ ka ụlọ ọrụ ahụ na-agba mgbasa ozi na India (ebe POCO dị ezigbo mma) na akara ngosi K20. Yabụ nke a nwere ike ịbụ ihe ngbanwe maka ọkọlọtọ Xiaomi, ọkachasị n'ahịa dị ka India.
Black Shark 2, nyocha na ule nke egwu egwuregwu nke kacha mma
Ọkọlọtọ nke Xiaomi anaghị ere nke ọma na ahịa a, yabụ, ọnụ ala (mana ọnụ karịa POCO) nwere ike ịbụ azịza. Mana nke a na-ejedebe olile anya ọ bụla na usoro Mi 9 ga-eme ya na India.
(Isi mmalite: 1 y 2)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi K20 agbaji AnTuTu tinyere Snapdragon 855 dị ike
United States nwere ike igbochi ntinye nke ngwaahịa Huawei